10 Best Mabheka To Edza In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Best Mabheka To Edza In Europe
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 07/06/2020)
Vafambi pamwe chinonhuhwira zino, Teerera! Unogona kunge akafunga kuti vofamba Europe chete nokuda kuedza kubva zvokuseredzera, asi iwe unofanira. Europe ine zvinonaka tarenda ichakuswededzai pedyo tsika nemagariro munyika uri kuongorora. Plus, vachataura ndinofarira yenyu kuravira namabukira. Chii Chiri kwete kuda?
Kana pfungwa rinonzwika anonakidza zvokuti kuedza uye muri kushamisika apo kutanga, regai neshungu. Kukubatsira kusarudza, taona vakanyora chinonhuhwira mazita 10 Best Mabheka kuedza parwendo rwako Europe. Ngatidyei vanyatsoona navo:
1. Amsterdam, The Netharenzi - My Little Patisserie
Zviri kashoma ukasangana zvakanaka yakaitwa French zvinonaka mune dzimwe nyika, asi hapana kufunganya - mubiki iri French. My Little Patisserie anopa marudzi ose inonaka zino French zvinofadza, kusanganisira chouquettes uye eclairs, nezvimwe unyanzvi.
Ane zvetsika French chakagadzirwa, My Little Patisserie zvakakwana rinovayeuchidza mweya France muna Dutch marongero. Chii chimwe, naivowo shandisa zvetsika French Recipes kuti hazvimbokundikani kugutsa zvishuwo zvako. Musapotse nzvimbo ino kana ukaona pakati Amsterdam!
bhekari ichi ndechimwe raiita hove-kunze mvura ezvinhu, sezvo hakusi zvose pamusoro Italian pastries. pachinzvimbo, ari Bakery House unyanzvi mune cupcake, tisingatauri American kufarira kuvamba kuti anogona kuva saka zvinonaka haumbofi uchida kusiya.
Chinhu chakanakisa pamusoro Bakery House ndiye siyana siyana, Kanenge apo kwako kuravira namabukira vane hanya. Asi sezvo zviri hazviiti chete kuedza mumwe cupcakes, muviri wako Beach haangatenderi kukutendai. zvisinei, cupcake izvi zvingava ukoshi kupedza imwe maawa mashoma nemamwe ari yokurovedza muviri kupisa kubvisa macalorie.
Kana uri vachishuva Kuomerera Italian zvokuseredzera, Biscottificio Innocenti haazorambi mwoyo iwe. Inofanira panzvimbo yayo pakati zvechokwadi 10 Best Mabheka kuedza parwendo yako Europe kuonga kwayo biscotti. Ichitoro chidiki chine oveni hombe iyo inogadzira mabhisikiti anonaka kwazvo auchazoita edza muItari.
Uye hamungazofadzi kuwana aiitwa pavo kwese - Biscottificio anochengeta zvayo zvakavanzika. Ivai nechokwadi kuti mharidzo yavo Brutti Ma Buoni. Zviri bhisikiti yakaita chepiramidhi kuti murege kuva kuwana zvakakwana.
4. Paris, France - Bread And Some Ideas
Zita iri rinoshamisa Parisian bhekari anoshandura sezvo Chingwa Ideas, ndiro zita yakafuridzirwa kuti mukanwa zvokudya. Uye apo zita ravo kunoreva specialization mu chingwa, kuti hazvina zvose kuti ape.
Unogonawo kufadzwa croissants dzavo! Izvi zvinhu zvakabikwa vane mukurumbira wokuva shasha croissants muParis. kana mune Paris, regai kurasikirwa nomumwe yakanakisisa Mabheka mu Europe.
5. Munich, Jerimani - rokubika Coffee Fast
Vanhu Munich rudo pastries dzavo, uye izvozvo pachena kubva kukoshesa kwavanoita Konditorei kahvia Schneller. Asi nei chimwe 10 Best Mabheka To Edza On Your Trip To Europe?
Mushure trudge kubudikidza dreadfully shinaira, kusuwa uye unonetesa Monday, unofanira chinhu kuchisimudza mweya yenyu. Kana uri Munich, mhinduro tinoiwana richinaka, Homemade pastries. Unogona findthose mu kofi nokukurumidza, pedyo Zvinonyaradza inopisa cup cappuccino kana koko. Kazhinji kacho, hamungambovi vanofanira chikonzero kushanyira zvachose.
6. Zurich, Siwizarendi - Conditorei Schober
Zurich ndiyo nzvimbo zvachose kutsvaka zvakanaka Mabheka mu Europe. The Swiss vane Chocolates zvikuru uye kunyange nani chikanywa nyanzvi dzokugadzira kuti zvirokwazvo kuroverera iwe. Conditorei Schober mumwe Mabheka unogona kuwana mu "inotapira pakona" Vekare Town.
Ndiyo yaiva tsika akatsvinda shoma Datenroku kuti ane mamwe zvinoshamisa pastries uye dzakaitwa nemaoko Chocolates unogona kuedza. Lovely Decor, zvokuseredzera zvikuru, uye pemarata kuti nakidzwa muzhizha - chii kwete kuda?
uri Hatina kuitwa pamwe Zurich asi! Pane zvakawanda nzvimbo imwe vakafanira kutaura pandandanda yakanakisisa Mabheka mu Europe. Aionekwa somunhu akanakisisa Datenroku muguta, Confiserie Sprungli rakanyatsojeka ukurumbire Zurich.
The dzakagadzirirwa akaita kuti vave nomukurumbira ndiye Luxemburgli Macaroonkuva, asi chokoreti ravo wakanaka uyewo. unyanzvi hwavo vari chokwadi kuti zvose pfungwa dzenyu nziyo. Haukwanisi kushanyira Confiserie Sprungli pasina kuedza kudzinga Luxemburgli Macaron!
8. Danish bhekari - Kaffehuset - Copenhagen, Dhenimaki
Haugoni kutaura pastries pasina kuziva sei unyanzvi weDanish vari zvichiita. Ndokusaka zviri hazvishamisi kuwana Danish bhekari kubva Copenhagen pakati yakanakisisa Mabheka mu Europe. The Kaffehuset chinhu chaicho kurwa kuti nzvimbo, uye zvikakunda nayo kuonga kwavo muromo-unodiridza pastries.
vadzidzi pamusoro Copenhagen nyasha Kaffehuset raMwari Cheesecake, sezvo zviri anozivikanwa kuti kupfuura kunofadza uye chinonyanya zvinonaka Cheesecake muguta. Unogona kuedza kurwisa kwezva ayo, asi iwe unenge Ungangove kukundikana - uye kufara chaizvo kuti iwe wakaita.
Chimwe kunze France European bhekari kuti akaita zita rayo pamusoro zvinozipa French zvinofadza, Lauderee achaita enchant iwe. Londoners rumbidza nzvimbo ino, uye iwe uchanakidzwawo kamwe iwe shanyira London kekutanga.
Macaron vari dzakagadzirirwa yavo, uye iwe havazokwanisi kuvaudza tisingabatanidzi zvavo French dzomuzana. Dzemauto mukati macaron achanyauswa mumuromo vako vanokutevera crunch kuti Wedding-mavara deko. Hazvina kuwana nani pane kuti!
10. Vienna, Ositiriya - Demel
Demel munhu akakurumbira dhizeti pakagadzwa muVienna nechikonzero - zvavo makeke. The Ana Demal kakku chinhu Tiered Chocolate showstopper kuti mumwe mukuru zvikonzero Demel wakakwana mukurumbira.
Demel kunopfuura chete tourist kufarira - nhoroondo yacho pamusoro 230 refu makore, iri rinonakidza uye anoyevedza. Vamwe unyanzvi unogona kunakirwa varipo Walnut keke, Esterhazy keke, Sachertorte, uye Dobos keke. In pfupi, kana uri kutsvaga kwenyu zuva dose keke, tarisa mberi pane Demel.
Akagadzirira kuve chisingakanganwiki (uye zvinonaka) zororo nemhuri yako yose? Shanyira Mabheka gumi yakanakisisa muEurope kubva yatakanyora pasi, uye imi muchava icharidzwa kure. Ivai nechokwadi kuronga pazororo wako uye bhuku rako chitima matikiti nenguva!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Best Mabheka To Edza On Trip Your To Europe ” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-best-bakeries-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)